Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri Ịsa nhazi Machine Line - China Qingdao Otu ebe Machinery
Roba AKUKO igwe
Roba Ịgwakọta igwe
Roba EXTRUDER igwe
Roba jụrụ igwe
Waste Taia Recycling & naputa Rubber Plant
Roba ọnwụ igwe
Plastic EXTRUDING igwe
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi igwe
Hot ndepụta Rubber Extruding Machine
Computer Control Kọlụm Type Rubber Vulcanizer
Rubber ebu eriri Vulcanizers ịgbado ọkụ Machine
Ugboro abụọ n'ígwé Steam Water Bath Retort Sterilizer
Wood osisi Anticorrosive Ọgwụgwọ tank
Igwe anaghị agba nchara Food Industrial Nri ite
Akwukwo nri na Mkpụrụ Washer
Water Bath Ịgba Mmiri ara ehi Pasterization Machine
Electric ma ọ bụ Steam Okpomọkụ Hot Air Food Ihicha Machine
Pickled Akwukwo nri nhazi Machine Line
Food Mkpụrụ Akwukwo nri Ihicha oven Machine
Mkpụrụ osisi na akwukwo nri nhicha Cutting Ihicha Machine
Atọ ite Parallel Type Food nhazi Retort Machine
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri Ịsa nhazi Machine Line
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri Ịsa nhazi Machine Line na-etinye obi ha dum na akwukwo nri nhazi elu echiche ụwa n'obosara, tinyere ọtụtụ China anụ ụlọ obodo akwukwo nri na / ma ọ bụ mkpụrụ nhazi mmepụta. Anyị mepụtara dum akara nke akwukwo nri mkpụrụ nhazi akụrụngwa. The ngwaọrụ technology bụ tozuru okè. Akwụkwọ nri na-kpochara, ekemende, bee vegetables, disinfected, drained, na mgbe nnyocha, ha na-aga n'ime bi ahịa na obere nchịkọta, na-aga n'ime kantiin ahịa na nnukwu p ...
Min. Order ibu: One Set
Tụkwasịnụ Ikike: 20 È kwa ọnwa
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T / T, L / C, Western Union
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri Ịsa nhazi Machine Line na-etinye obi ha dum na akwukwo nri nhazi elu echiche ụwa n'obosara, tinyere ọtụtụ China anụ ụlọ obodo akwukwo nri na / ma ọ bụ mkpụrụ nhazi mmepụta. Anyị mepụtara dum akara nke akwukwo nri mkpụrụ nhazi akụrụngwa.
The ngwaọrụ technology bụ tozuru okè.
Akwụkwọ nri na-kpochara, ekemende, bee vegetables, disinfected, drained, na mgbe nnyocha, ha na-aga n'ime bi ahịa na obere nchịkọta, na-aga n'ime kantiin ahịa na nnukwu nchịkọta.
Mgbe nhazi, na akwukwo nri na mkpụrụ osisi ndị na atụmatụ nke dị ọcha, idebe ihe ọcha, adaba na mma wdg
Mmepụta akara nwere ike iji hazie: kabeeji, akwụkwọ nri, kọlịflawa, letus, karọt, ero, green-ede ede, poteto, eggplant, green beans, peas na ndị ọzọ na akwụkwọ nri.
The igwe ka nke elu mma SUS304 igwe anaghị agba nchara, na akara na mba nri ụlọ ọrụ ụkpụrụ, mmepụta akara adopts afụ mpịakọta / sikrob / mmiri ịgba technology ka cleam na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi na nnukwu n'ókè.
The igwe na akara, ịdị elu bụ mgbanwe site ukpụhọde casters / n'ala wheel, oxygen mgbapụta gas, otú ahụ ka mmiri jupụtara egosipụta anya dị ka sie. The vaibret nke egosipụta na-emepụta
ultrasound, otú ahụ na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi nwere ike inwe a site ọcha na merụrụ onwe ha.
Disinfection akara: disinfection oge nwere ike e mere na setịpụrụ dị ka ndị ahịa 'zuru ezu chọrọ. Site ịgba na mmiri saa, na-eme ka nri na mkpụrụ osisi izute mbupụ ọkọlọtọ.
Sprinkler / ịgba akara: abụọ dị ọcha mgbe disinfection, ịzọpụta mmiri n'ihi na mmiri ịgba.
Ihicha akara; The ngwaahịa na-a ngwa ngwa ihicha, iji gbochie nke abụọ mmetọ mgbe disinfection.
Dị ka ọrụ 'chọrọ tinye ozone nwoke ịga ụlọ ọgwụ, elu nsogbu ịgba na ahịhịa ịkwaga ọcha / iche.
Mgbe iji dị ka desalination ihicha, nwere ike iji multiple set igwe na-emeso dị iche iche di iche iche akwukwo nri na mkpụrụ osisi.
Previous: Hot Water esi tank Machine
Osote: Atọ ite Parallel Type Food nhazi Retort Machine
azụmahịa akwukwo nri saa igwe
ọka nhazi akụrụngwa
ọka nhazi igwe
ụbọchị nhazi akara
ụbọchị nhazi osisi
ọhụrụ l eafy mgbọrọgwụ akwukwo nri washer nhazi igwe akara
ọhụrụ akwukwo nri na mkpụrụ osisi Mgbagwoju saa ihicha ihicha igwe
mkpụrụ osisi na akwukwo nri ihicha ihicha akara
mkpụrụ akwukwo nri nhazi igwe saa ihicha grading igwe
home akwukwo nri saa igwe
akwukwo akwukwo nri saa igwe
ụlọ oriri na ọṅụṅụ na akwukwo nri saa igwe
mgbọrọgwụ akwukwo nri saa igwe
obere akwukwo nri saa igwe
akwukwo nri na mkpụrụ osisi saa igwe
akwukwo nri mkpụrụ saa igwe
akwukwo nri saa igwe price
akwukwo nri saa igwe na ozone
Pickled Akwukwo nri Desalting Ịsa Machine
Mkpụrụ osisi na akwukwo nri nhicha Ịcha Ihicha Mac ...
Atọ ite Parallel Type Food nhazi Retort ...
Okwu: # 935, Lingang Industrial Mpaghara
Ekwentị: + 86- (0) 532-85176125
2018 China roba ígwè development
China nri ígwè development